Olympus Photo Recovery-3 Nzọụkwụ iji weghachite Images si Olympus Igwefoto
> Resource> Naghachi> 3 Nzọụkwụ naghachi Photos si Olympus Igwefoto
Image ọnwụ nke Olympus igwefoto bụ a na-enwekarị nsogbu anyị pụrụ izute mgbe anyị na-na-photos. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ n'ihi na nke anyị akpachapụghị anya, dị ka mmadụ na mberede ihichapụ ma ọ bụ formatting, mgbe mgbe ụfọdụ ọ bụ n'ihi na-ejighị n'aka ihe, dị ka ike anya, virus ọrịa, ma ọ bụ na mberede odida nke kaadị. Bụ Olympus foto mgbake-ekwe omume? Olee otú anyị pụrụ naghachi foto site na Olympus igwefoto?
General na-ekwu okwu, ị nwere ike naghachi foto site na Olympus igwefoto site foto mgbake software. Tupu furu efu ihe oyiyi na-Ewepụtara si Olympus igwefoto, ị kwesịrị ị na-echeta:
1), tinyere Olympus igwefoto n'ebe dị nchebe
2), Ejila ọhụrụ oyiyi
3), Egbula ọzọ faịlụ ma ọ bụ ndị ọzọ data na otu ebe ebe furu efu oyiyi e echekwara, n'ihi ọhụrụ data ga overwrite ndị mbụ furu efu photos, na-eme ka Olympus foto mgbake ihe siri ike.
Olee otú naghachi foto site na Olympus igwefoto na ihe Olympus foto mgbake ngwá ọrụ
Mbụ, na-Olympus foto mgbake software ebe a: Wondershare Photo Recovery, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac.
Ẹkedori Olympus foto mgbake software, na jikọọ na gị Olympus igwefoto na kọmputa. Ọ bụrụ na gị furu efu oyiyi-echekwara na kaadị ebe nchekwa, na-a kaadị agụ na jikọọ na ya na kọmputa gị. Ozugbo ngwaọrụ nwere ike achọpụtara, ọ ga-apụta dị a mbanye akwụkwọ ozi dị otú (H :) n'okpuru gị na kọmputa. Naanị 3 nzọụkwụ na-chọrọ naghachi foto site na Olympus igwefoto:
Nzọụkwụ 1: Pịa "Malite" na-amalite Olympus foto mgbake.
Nzọụkwụ 2: Họrọ kaadị ike iṅomi.
Họrọ Olympus igwefoto ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa (ebe gị furu efu oyiyi e echekwara) dị ka a lekwasịrị disk, wee pịa 'iṅomi' na-amalite akpaka scanning usoro.
Nzọụkwụ 3: Preview na zọpụta faịlụ
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu hụrụ ihe oyiyi na-ego ọ bụrụ na gị furu efu na-ahụ. Ọ bụrụ na gị furu efu Olympus ihe oyiyi na-enen ka a hụrụ, ị nwere ike naghachi ya mgbe ịdenye usoro ihe omume. Na mgbe ahụ ịzọpụta natara ihe oyiyi na ebe ọzọ, ọ bụghị onye ebe furu efu oyiyi ndị. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi foto site na nkebi H :, ị kwesịrị ị na-ezipụta a nchekwa ịzọpụta ihe oyiyi na nkebi E: ma ọ bụ ndị ọzọ na nkebi, ọ bụghị nkebi H :.
Soro n'elu 3 nzọụkwụ otu otu, ị ga-ahụ na-agbake foto site na Olympus igwefoto bụghị dị ka ike dị ka i chere.
Video nkuzi nke Olympus igwefoto foto mgbake
Olee otú Naghachi ehichapụ ZIP Files